Maxaa sababay in dheerarka buurtaan uu ka siyaado intii hore loogu ogaa? - Politicians in the News
Maxaa sababay in dheerarka buurtaan uu ka siyaado intii hore loogu ogaa?
khuburada qaar ayaa aaminsan in arrintaan uu sababay dhulgariir aagaas ku dhuftay sanadkii 2015-kii
Buurta Everest ee adduunka ugu dheer ayaa 0.86 mitir ka sarreysa sidii markii hore ay aheyd kadib markii xisaabin rasmi ah lagu sameyay waxaana hadalkaan si wada jir ah ugu dhawaaqay dalalka Nepal iyo Shiinaha.
Illaa iyo hadda dalalkaan ayaa ku kala aragti duwan in lagu daro daboolka barafka ee buurta dusheeda sare ka muuqanaya . Dhererka cusub waa 8,848.86 oo Mitir .
Qiyaastii hore ee rasmiga ahed ee Shiinaha waxey aheyd 8,844.43 oo Mitir taas oo buurta ka dhigtay in ku dhow afar mitir in ay ka hooseeyo oddaraska dalka Nepal.
Everest waxey ku taalaa xadka udhaxeeya Shiinaha iyo Nepal dadka buuraha korana waxaa ay ka koraan labada dhinac.
Saraakiisha wasaaradda arrimaha dibadda ee Nepal iyo waaxda baarista ee dalkaas ayaa sheegay in khuburo ka socota labada dal ay iska kaashadeen inay isku afgartaan dhererka cusub.
Heshiis si wada jir ah loogu dhawaaqi doono cabirka cusub ee dhirirka buurta ayaa la sameeyay intii lagu guda jiray booqashadii Madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping uu ku tagay caasimada Nepal ee Kathmandu sanadkii hore.
Maxay ugu kala duwan yihiin dhererka rasmiga ah?
Maxaa su’aal looga keenay buurta dherirkeedu?
Sidee dib loogu cabiray Buurta Everest?
Mas’uuliyiinta Shiinaha ayaa horay u sheegay in buurta Everest ay tahay in lagu cabiro dhererkeeda dhagaxa, halka mas’uuliyiinta Nepal-na ay ku doodeen in barafka dusha sare ka bidhaamaya lagu daro xisaabta.
Mas’uuliyiinta Shiinaha u qaabilsan arrintaan ayaa xisaabiyey tiradooda ka dib markii ay cabbireen buurta sanadkii 2005-kii.
Saraakiisha dowladda Nepal ayaa iyaguna BBC-da u sheegay in sanadkii 2012-kii uu jiray cadaadis kaga imaanayay dowladda Shiinaha oo ku aadaanaa in ay aqbalaan cabbirka Shiinaha ee dheerarka buurta sidaas darteedna ay go’aansadeen inay aadaan cabbiraad cusub.
Dhererka buurta ee ah 8,848 mitir ee Nepal ay isticmalai jirtay waxaa lagu go’aamiyay baaritaan guud sanadkii 1954-kii balse waa markii ugu horeysay ee wadanku hada uu sameeyo cabirkiisa u gaarka ah.
Shaqaalaha dhulka sahmiya ee Shiinaha
Afar qof oo ka mid ah dadka dhulka sahmiya una dhashay Nepal ayaa qaatay tababar labo sano ah howlgalka, ka hor inta aysan u ambabixin halka saree e buurta.
“Tan ka hor, waligeen weligeen cabirka ma aanan sameynin.” ayuu yiri Damodar Dhakal, oo afhayeen u ah waaxda baarista ee Nepal, oo BBC -da la hadlay.
Khimlal Gautam oo hoggaamiya kuwa dhulka sahmiya ee dalka Nepal ayaa suulkiisa lugta ku waayay qabow awgiis intii lagu gudajiray rakibaadda qalab cabirkiisu sarreeyo sanadkii la soo dhaafay.
“Marka loo eego kuwa soo koobay, sare u qaadista meesha ugu sarreysa waxay ka dhigan tahay guul weyn. Anaga ahaan, waxay noo ahayd bilow,” Mr Gautam ayaa sidaas u sheegay BBC-da ka dib soo laabashadiisii.
“Si ka duwan baaritaannadii kale ee Everest ee horey loo sameeyay waxaan dooranay 03:00 si loo yareeyo khaladaadka ay sababi karaan arrimaha la xiriira iftiinka qoraxda ee maalinta.”ayuu hadalkiisa raaciyay Mr Gautam.
Qaar ka mid ah khubarada cilmiga dhulka ayaa soo jeediyay in dhulgariirkii weynaa ee dhacay sanadkii 2015-kii laga yaabo inuu saameyn ku yeeshay joogga buurta Everest. Dhulgariirkaas oo cabbirkiisu ahaa 7.8 ayaa waxaa ku dhintay ku dhawaad 9,000 oo qof oo reer Nepal ahaa, wuxuuna sababay qulqulatooyin aasay qaybo ka mid ah aagga buurta. Ugu yaraan 18 qof oo ahaa dadka buuraha kora ayaa la dilay. Qaar ka mid ah khubarada cilmiga dhulka ayaa sheegay in dhul gariirku uu sababi karo in barafka buurta Everest uu yaraado.
Seynisyahannadu waxay ogaadeen in meelaha kale ee Himalaya sida Langtang Himal, ee woqooyiga Kathmandu, uu dhererkoodu hoos u dhacay qiyaastii hal mitir dhulgariirka ka dib.
Qaar kale waxay ku doodeen in buurta Everest, sida kuwa kale ee ugu sarreeya Himalaya, laga yaabo inay si dhab ah u koreen wakhti ka dib. Balse khubaradu waxay leeyihiin dhulgariirro waaweyn ayaa ka dhalan kara in howshaas dib looga noqdo.
Dhulgariirkii dhacay sanadkii 2015-kii sidoo kale waa sababta ugu weyn ee keentay inaan dib u cabirno buurta, ayuu yiri Mr Dhakal.
Xeeldheerayaasha dhulka sahmiya ee Nepal
Buuraha dhererkooda waxaa lagu cabiraa heerka badda oo sal u ah. Marka way ka yartahay ka shaqeynta meesha kore, heerka halka hoose uu ahaan lahaa.
Nepal waxay adeegsatay Bay of Bengal oo ah qaybta waqooyi-bari ee badweynta Hindiya, inay tahay heerkeeda badda,balse Hindiya waxay horey u sahamisay meel u dhow buurta Everest, oo u dhow xadka Hindiya iyo Nepal, laga bilaabo gacanka, waxayna awoodday inay siiso baarayaasha Nepal dhererka xilligaas.
Halkaas, Nepal waxay ka dhisatay xarumo fidsan ku dhowaad 250-kiillo mitir oo gaaraya illaa dhulka sare ee buurta Everest.
Kuwa dhulka sahmiya ee dalka Shiinaha ayaa sheegay in ay adeegsadeen Badda jaallaha ah ee ku taal gobolka bari ee Shandong heerka badda ah.
Baarayaasha shiinaha ka socday ayaa heerka biyaha badda ay garsisanyihiin ku saleyay sahankooda, sida ay ku warantay warbaahinta dowladda shiinaha.
wpaadmin2020-12-08T23:14:00-06:00December 8th, 2020|Categories: China|Tags: Xi Jinping|
China Focus: Top political advisor stresses peaceful, integrated development of cross-Strait relations
South China Sea: US announces $280million Taiwan arms sale amid 'daily military threats'
Ethiopia Uganda South Africa Ireland France Iran Germany Turkey India Palestine Israel Mexico Egypt United Arab Emirates United States Armenia Tanzania Nigeria United Kingdom Kenya Canada Argentina Brazil China Russia
Merkel PANIC as Germany worst hit by no deal – expert warns Europe to be '£80bn worse off'
Abdalla Hamdok (160) Abdel Fattah Al-Sisi (236) Abdelmadjid Tebboune (279) Abiy Ahmed (435) Alberto Fernández (388) AMLO (323) Angela Merkel (2876) Armen Sarkissian (195) Bashar al-Assad (327) Benjamin Netanyahu (705) Bernie Sanders (793) Boris Johnson (3539) Carrie Lam (149) Covid-19 (10238) Cyril Ramaphosa (568) Daniel Ortega (157) Donald Trump (5066) Emmanuel Macron (2938) Evo Morales (401) Frank-Walter Steinmeier (183) Hassan Rouhani (2002) Jair Bolsonaro (983) Jean Castex (338) Joe Biden (3641) John Magufuli (433) Justin Trudeau (2331) Khalifa bin Zayed Al Nahyan (251) Li Keqiang (336) Mahmoud Abbas (409) Micheál Martin (308) Mikhail Mishustin (394) Mostafa Madbouly (198) Muhammadu Buhari (1390) Narendra Modi (2692) Nicolás Maduro (184) Nicos Anastasiades (144) Nikol Pashinyan (360) Ram Nath Kovind (180) Recep Tayyip Erdoğan (513) Tamim bin Hamad Al Thani (143) Tsai Ing-wen (192) Uhuru Kenyatta (903) Vladimir Putin (2721) Xi Jinping (2666) Yoweri Museveni (717)
Africa (150) Algeria (306) Argentina (533) Armenia (404) Belize (110) Bolivia (372) Brazil (796) Canada (2469) Chile (119) China (2742) Cuba (124) Cyprus (119) DR Congo (148) Ecuador (123) Egypt (401) El Salvador (100) Ethiopia (406) France (2435) Germany (2704) Guatemala (109) Haiti (124) India (2487) Iran (2124) Iraq (135) Ireland (391) Israel (410) Kenya (898) Mexico (529) Nicaragua (136) Nigeria (1397) Palestine (409) Peru (119) Qatar (383) Russia (2305) Saudi Arabia (137) South Africa (535) Sudan (135) Syria (324) Tanzania (442) Turkey (425) Uganda (758) United Arab Emirates (454) United Kingdom (2806) United States (2170) Venezuela (118)